Sidina vaovao avy any Tel Aviv mankany Maroc, Bahrain, Saudi Arabia, UAE - ary mihabe
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Sidina vaovao avy any Tel Aviv mankany Maroc, Bahrain, Saudi Arabia, UAE - ary mihabe
Mampifandray mivantana ny Tel Aviv amin'ireo seranam-piaramanidina any UAE, Morocco, Saudi Arabia, ary Bahrain dia hanitatra ny dia sy ny fizahan-tany any Moyen Orient.
Nanjary lehibe kokoa izao tontolo izao ho an'ny israeliana miaraka amin'ny filoham-pirenena amerikana Trump nifampiraharaha amin'ny fifanarahana fandriam-pahalemana amin'ireo firenena mitombo ao Atsinanana-Afovoany sy ny Faritra Golfa.
America First no teny filamatran'ny filoham-pirenena amerikana Trump sy ny fitaovana fivarotana fitaovam-piadiana satria antenaina fa ireo firenena rehetra ireo izao dia havela hahazo fitaovana ara-tafika avy any Etazonia. tanjona handresena amin'ny fifidianana amerikana.
Talohan'izay, taorian'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump momba ny fifanarahana fandriam-pahalemana teo amin'i Israel sy ny Emira Arabo Mitambatra, Jared Kushner, mpanolotsaina zokiolona ao amin'ny White House, dia nanambara fa fanjakana arabo roa no nanaiky ny hanokatra ny habakabaka hivezivezena mankany sy avy any Israel, anisan'izany i Bahrain, izay kasaina hanatevin-daharana ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana UAE-Israeliana.
Morocco sy Israel dia kasaina hanangana sidina fiaramanidina mivantana ho ara-dalàna ny fifandraisana Arabo-Isiraeliana, the Jerusalem Post tatitra amin'ny sabotsy.
Ny tatitra dia tonga ho ampahany amin'ny ezaka ara-dalàna Arab-Israeliana natomboky ny governemanta Trump taorian'ny nahatratrarany ny fifanarahana UAE-Israeliana. Ny fanaovana sonia fifanarahana dia kasaina hatao ao amin'ny White House raha vantany vao ny talata ho avy izao.
Tamin'ny 15 Aogositra, nitatitra ny The Times of Israel, nitanisa ireo tompon'andraikitra amerikana tsy fantatra anarana, fa i Maraoka no firenena Arabo manaraka hanao ara-dalàna ny fifandraisana amin'i Tel Aviv, aorian'ny UAE. Na dia tsy manana fifandraisana diplomatika ofisialy amin'i Israel aza i Maraoka, misy ny fizahantany sy ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny firenena roa tonta. Ankoatr'izay, ny jiosy maraokana no vondrom-piarahamonina jiosy faharoa lehibe indrindra ao Israel, aorian'ny jiosy rosiana, olona mihoatra ny iray tapitrisa.
Ny Alarobia, ny vinantolahin'i Trump ary mpanolotsaina zokiolona ao amin'ny Trano Fotsy, Jared Kushner, dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa nanaiky ny hanokatra ny lanitra ho an'ny sidina mankany sy avy any Israely i Saudi Arabia sy Bahrain.
Ny zoma dia nanambara ny Mpanjaka Hamad bin Isa Al Khalifa avy any Bahrain fa hanaiky ny hanatevin-daharana ny talata fanaovan-tsonia ny fifanarahana fandriampahalemana UAE-Israeliana. UAE sy Bahrain no ho fanjakana arabo fahatelo sy fahefatra, hanangana ara-dalàna ny fifandraisana amin'i Israely.
Taloha dia i Egypte sy Jordanie ihany no efa nanana fifandraisana ofisialy tamin'ny Tel Aviv, fa na dia any Qatar aza dia efa nisy birao niasa miafina nandritra ny taona maro.
Ahoana ny fomba tsy fanaovan'ny UNWTO ny fiantsoana fifidianana marina?
Manampahefana volamena i Ogandà mpiaro ny fiainana dia Jacob Kiplimo